I-South Beach Oceanfront Suite - I-Airbnb
I-South Beach Oceanfront Suite
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Gailen
IZINSUKU EZINGU-30 EZINCANE ZOKUQASHWA
Indawo elungele wonke umuntu othanda ihhotela le-boutique elinezinsiza ezigcwele ezihlanganisa ijimu kanye nechibi lokubhukuda elimangalisayo. Itholakala eduze ngqo neRitz Carlton South Beach kuLincoln Road kanye noLwandlekazi i-Atlantic; Esifundeni se-Art Deco ayikho indawo engcono.
Indawo yokupaka: Indawo enikelwe i-valet inikezwa kuphela ukuthi isetshenziswe kuphela (inani elingu-$30/usuku) Izivakashi ezivakashele umqashi obhalisiwe kufanele zikhokhele indawo yokupaka.
Sidale indawo ekahle yesitezi sesi-10 yanoma ubani oncamela ukuzwa kwehhotela le-boutique enazo zonke izinsiza zefulethi elihlome kahle. Ikhishi livuselelwe ngazo zonke izinto ezisetshenziswayo ezintsha futhi lihlome ngokuphelele ngomshini wokuwasha izitsha, i-microwave, ihhavini le-toaster, iprosesa yokudla, umenzi wekhofi njll kanye nazo zonke izitsha nezinto zokupheka.
Qaphela: Izihambeli eziphelele EZIMBILI zivunyelwe ukugodla le yunithi.
Izivakashi: Zonke izivakashi kufanele zibhalisele ukungena esakhiweni ukuze zivakashele izivakashi ezibhukhelwe efulethini.
I-Cable TV egumbini lokuhlala, I-Cable TV ekamelweni, iphrinta engenantambo ye-HP, i-wifi yamahhala yangasese
Iyunithi inombhede we-ottoman wokudonsa. Usofa akufanele usetshenziswe njengombhede.
Itholakala eduze ngqo neRitz Carlton South Beach kuLincoln Road; ayikho indawo engcono. Indawo yokupaka i-valet yamahhala yonga u-$30 ngosuku ezinkokhelweni zokupaka e-South Beach.
Kuthule kakhulu futhi kunendawo eningi--- uma usupakile ungakwazi ukuhamba cishe noma kuphi lapho udinga ukuya khona kuLincoln Road noma umgwaqo ohamba ngezinyawo ngaphandle nje. I-Oceanfront
Indawo yokuzivocavoca emagcekeni (ama-dollar angu-60 akhokhelwa ukwakha - ngaphandle kwalokho amanye amajimu aseduze), indawo yokubhukuda enhle, izihlalo zasolwandle ezinesaphulelo kanye nezambulela ogwini.
Ayikho indawo engcono eSouth Beach! Itholakala olwandle eduze ngqo ne-Ritz Carlton, i-Decoplage isendaweni ehamba phambili e-South Beach yokuthenga nokudlela; Lincoln Road.
Ngaphambi kokufika, kuyadingeka ukuthi sonke isivakashi sigcwalise isicelo se-inthanethi esidingwa isakhiwo ngezinjongo zokuphepha.
Ngemva kokugunyazwa kusengaphambili kokubhukha kwakho, sicela uvakashele (iwebhusayithi ifihliwe) futhi usebenzise ikhodi 6056 enesaziso samahora angu-72 noma ikhodi 6060 yesevisi ye-RUSH. Iyunithi ithi #1038
Isikhungo sokufaneleka (ama-dollar angu-60 atholakalayo) , indawo yokubhukuda enhle esanda kuthola ukulungiswa kwamadola ayizigidi ezimbili eminyakeni emibili edlule. Ulwandle lufinyeleleka ngokuqondile esakhiweni futhi izaphulelo zinikezwa ngokuqashwa kwezihlalo zasebhishi/isambulela kubahlali baseDecoplage.
Ngizohlangana nezivakashi izikhathi eziningi ukuze nginikeze okhiye futhi ngihlala e-Coconut Grove okuyindawo eyimizuzu engu-15 kuphela uma zidinga usizo.
Le yunithi inendawo yokupaka i-valet ehlanganisa --- SPACE # XXX
Vele wazise i-valet ukuthi udinga imoto yakho ipakwe esikhaleni #XXX futhi unikeze le nombolo yesikhala uma ufuna imoto yakho ilethwe.
Ngaphambi kokufika, kuyadingeka ukuthi sonke isivakashi siqedele ukuqinisekiswa kobuwena okuku-inthanethi okudingekayo isakhiwo ngezinjongo zokuphepha. Lokhu kuphathwa inkampani yangaphandle ukuze kuqinisekiswe ukuthi ulwazi lwakho lomuntu siqu lugcinwa luyimfihlo. Uma ukubhukha kwakho sekuqinisekisiwe ngizokuthumelela isivumelwano sokuqashisa kanye nemvume yomnikazi engathunyelwa nguwe ku-inthanethi
4.77 · 27 okushiwo abanye
Inombolo yepholisi: BTR007126082019, 2213611